Iphaneli yeflethi yeflethi
Itroli yokusonga imithwalo
Heavy Duty Isandla Iinkuphelostencils
Indawo yokutyela itroli
Yenza konke okusemandleni ethu ngo-2021
ngomphathi ku 21-09-07
U-2021 ngunyaka onzima ngokwenene. Impembelelo ye-COVID-19 kumazwe ahlukeneyo iyaqhubeka, kwaye ukuthengisa kumashishini ahlukeneyo kuyehla. Ukuchaphazeleka kukunyuka kwamaxabiso kwihlabathi liphela, izinto zentsimbi ekrwada zenyuka ngaphezulu kwe-40% kunye nealuminium phantse ngama-50%. Ezinye izinto ezincedisayo 'amaxabiso, anjengeebhokisi, iiteyiphu ...
Ixesha leenqwelo zokuthenga eziSmart
ngomphathi ku 20-07-20
Ngokuphuhliswa kwetekhnoloji yobukrelekrele bokuzenzela kunye notshintsho olutsha kumzi mveliso weentengiso, iinkampani ezininzi seziqalisile ukuphuhlisa okanye ukusebenzisa iinqwelo zokuthenga ezi-smart. Nangona inqwelo yokuthenga ehlakaniphileyo inezibonelelo ezininzi zesicelo, ikwafuna ukuthathela ingqalelo imfihlo kunye neminye imiba. ...
Iinqwelo othengela izinto ezininzi ezininzi kuzo, uyifanele
Inqwelo yokuthenga eneenjongo ezininzi, amandla amakhulu, anokuhlala kwaye asonge, athandwe ngokunzulu ngabathengi! Ngokuphuculwa kwemigangatho yokuphila, iimfuno zabantu zomgangatho wobomi nazo ziya zisiba phezulu, nto leyo nayo iph ...
Uyisebenzisa njani iBhasikithi yokuThenga kunye neenqwelo zokuthenga ngokuchanekileyo
Inkqubela phambili kuluntu, ubomi bethu ngakumbi ngakumbi lula. Ukuba ufuna ukuthenga imifuno, iziqhamo, izinto zokuhlamba kunye nezinye izinto ezifunekayo mihla le, ungasombulula zonke iingxaki ngokuya kwisuphamakethi wenze isangqa. Kodwa uyazi? Ivenkile enkulu yeyona nto ibaluleke kakhulu ...
5F-50497, iSango lama-75 kwiSithili 4, i-Yiwu yeNtengiso yeHlabathi, iZhejiang, China i-322000
© Copyright - 2019-2020: Onke amalungelo agciniwe. iveliso ezifakiwe - Iimpawu ezishushu - Sitemap.xml - AMP Iselfowuni